सुन्दर स्त्रीतिर किन मन तानिन्छ ? - VOICE OF NEPAL
सुन्दर स्त्रीतिर किन मन तानिन्छ ?
३० बैशाख २०७६, सोमबार १७:१६ 337 ??? ???????
जस्तै हामी कुनै दिन व्रत बस्यौँ, भोकै बस्यौँ । आज दिनभरि भोकै बस्ने भनेर बस्यौं भने त्यही दिनचाहिँ दिनभरि खानाको याद आउँछ । व्रत नबसेको दिन कतिपटक खाना खाएँ भन्ने मतलव नै हुदैन । त्यतापट्टि ध्यान जाँदैन, मनमा त्यो सोचिँदैन । बरु मनले अरु कुराहरु सोच्छ । कसरी प्रगति गर्ने, कसरी राम्रो गर्ने, अरु कामहरु कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर हाम्रो मन त्यतातिर जान्छ । खानेकुरामा ध्यान जाँदैन तर जुन दिन व्रत बस्यो, त्यो दिन मन जतिखेर पनि खानामा जान्छ । अहिलेसम्म भोकै बसियो अब भोकै बस्नलाई कति घण्टा बाँकी छ ? यसरी मनमा खाली खानाको मात्र याद आउँछ ।
जेलाई दबाउनु हुन्छ, त्यही चीज प्रकट हुन्छ । यो हाम्रो मनको स्वाभाव हो । हामीले कामवासनालाई दबायौँ भने कामवासना प्रकट भएर आउँछ । यसलाई हामी रोक्न सक्दैनाँै किनभने यो प्राकृतिक रुप हो । प्राकृतिक चीजवस्तुहरु स्वाभाविक हुन्छन् । त्यसो भए ब्रह्मचर्यचाहिँ के हो त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । ब्रह्मचर्य भनेको ब्रह्मको जस्तो आचरण गर्नु हो । ब्रह्म भनेको प्रकृति, प्रकृतिको जस्तो आचरण गर्नु ब्रह्मचर्य हो । प्रकृति त सिर्जनशील छ । हरहमेसा नयाँ कुरा जन्माएको जन्मायै छ । विवाह नगर्नु, बच्चा नजन्माउनु यो ब्रह्मचर्य होइन । प्रकृतिले त बच्चा जन्माएको जन्मायै छ । नयाँ–नयाँ सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले प्राकृतिक हुनुचाहिँ ब्रह्मचर्य हो । प्रकृतिको जस्तो आचरण गर्नुचाहिँ ब्रह्मचर्य हो । ब्रह्मको जस्तो आचरण जसले गर्यो , त्यही ब्रह्मचर्य हो ।
त्यसैगरी हाम्रो नियममा पनि तलमाथि भएन भने ब्रह्मचर्यको साधना हुन्छ । कति बेला सुत्ने, कति बेला उठ्ने कुन बेला कस्तो कर्म गर्ने भन्ने लयबद्ध हुनुपर्छ । नियमबद्ध हुनुपर्छ । जहाँ नियमसंगत तरिकाले कर्म गर्यौ , हाम्रो मन नियमसँग राजी भयो भने त्यही नै ब्रह्मचर्य हो ।
सहज, स्वाभाविक, सरल, प्राकृतिक हुनुचाहिँ ब्रह्मचर्य हो र यो ब्रह्मचर्यमा उपलब्ध नभईकन, सबैप्रति समान दृष्टि र सबैप्रति सम्मान, सबैप्रति कल्याण भाव आफूभित्र नजन्मीकन हामी ब्रह्मचर्यमा उपलब्ध हुनुहुदैन र ब्रह्मचर्यमा उपलब्ध नभईकन आफूभित्रको परम आनन्दमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ ।
ब्रह्म सिर्जनशील छ । जतिखेर पनि केही न केही रचना गरी नै रहेको हुन्छ । त्यसैले हाम्रो चित्त पनि, हाम्रो कर्म पनि नयाँ चीजको रचनामा लाग्नुपर्छ । जसले नयाँ चीजको सिर्जना गर्न थाल्यो, त्यो ब्रह्मचर्यको यात्रातिर लाग्यो । जसले एउटा नयाँ गीतको रचना गर्यो , जसले नयाँ–नयाँ चित्र कोर्यो , जसले एउटा नयाँ कथाको निर्माण गर्यो, जसले एउटा नयाँ आविष्कार गर्यो, त्यो ब्रह्मचारी हो । त्यसले ब्रह्मको जस्तो आचरण गर्यो किनभने ब्रह्मले त्यही गर्छ । नयाँ–नयाँ सिर्जना गर्छ । सर्जक बन्नु ब्रह्मचर्य हो ।
बन्ध्याकरण गर्नु ब्रमह्चर्य होइन । यो ब्रह्मले वन्ध्याकरण गर्यो भने के हाल होला ? सृष्टि समाप्त भयो । त्यही भएर हाम्रो संस्कृतिमा छोराछोरीको मूल्य रह्यो । वंश चल्नुपर्छ भनियो । किन भनियो भने प्रकृतिलाई सहयोग गर्नका लागि भनियो । मैले पनि सहयोग गरेँ भने प्रकृतिलाई मद्दत पुग्छ । त्यत्ति हो । सिर्जना त उसले गर्छ । मैले कहाँ गरेको हो र ? वश् म सहायक बन्न सकूँ । सर्जक त उही हो । मेरो सिर्जना कहाँ हो ।
दुईटा देख्यो– अब यो स्त्री राम्रो यो पुरुष नराम्रो, यो पुरुष राम्रो या यो स्त्री नराम्रो, अब उसको मनमा त द्वैध जन्मियो यो द्वैध ब्रमह्चर्य होइन । जसले स्त्रीको आकृतिमा या पुरुषको आकृतिमा भित्रको चैतन्यताभित्रको जुन व्यक्ति हो, त्यसलाई देख्यो त्यो व्यक्ति ब्रमह्चर्यमा उपलब्ध भयो । उसको लागि न महिला रह्यो न पुरुष रह्यो । दुईटै समान रहे । भित्रको त्यो आत्मातत्व जसले दर्शन गर्यो , त्यो हो ब्रह्मचारी । पहिलो, हाम्रा आचरणहरु नियमसंगत हुनुपर्छ । दोस्रो, मेरा कर्महरु सर्वहिताय हुनुपर्छ । तेस्रो, सबैलाई समान रुपमा हेर्ने दृष्टि उपलब्ध हुनुपर्छ । धनी, गरिब, ठूलो, सानो, को महिला, को पुरुष सबैभित्रको चैतन्यतालाई देख्ने समान रुपमा सबैलाई हेर्न सकेँ भने, सबैप्रति समानरुपले व्यवहार गर्न थालेँ, सर्वहिताय काम गर्न थालेँ भने म ब्रमह्चर्यमा गएँ । सीधै माथि पुगेँ । हामी सबैलाई पनि ध्यानस्थ हुने अवसर मिलोस् ।